Shimbir looga shakiyey basaasnimo oo xabsi la dhigay - BBC News Somali
Shimbir looga shakiyey basaasnimo oo xabsi la dhigay
Xigashada Sawirka, Hisham al-Hoot
Gorgorka la qabtay ayaa lagu magacaabaa 'Nelson'
Gorgor lagu magacaabay Nelson ayaa dalka Yemen lagu qabtay isaga oo hawada Yemen duulaya, waxaana gacanta ku dhigay ciidamada dalkaas.
Markay ciidamadu gacanta ku dhigeen Shimbirka Gorgorka waxay ku xireen qol mugdi ah, iyagoo sheegay iney uga shakiyeen inuu ciidamada Yemen basaasayey.
Gorgorkan oo ay ciidamadu ku qabteen magaalada Tiyaaz ee dalkaasi Yemen ayaa lugtiisa ka helay qalab loo maleeyey inuu wax duubo.
Ciidamada qabtay gorgorkana waxay sheegeen qalabka ay gorgorka lugtiisa ay ka heleen ineysan horay u arag uuna yahay qalab ku cusub, waxa uu qabanayana ay u baahan tahay khubarada aqoonta u leh iney faahfaahin ka bixiyaan.
Dagaal kasta oo dunida ka socda in noole lagu soo oogo dacwad ah inuu basaasnimo ku guda jiray waa dambi aad u adag oo xukun adag lagu muteysanayo, waloow waxa la qabtay uu shimbirka Gorgorka yahay iyadoo aan horay loo arag shimbir xukun lagu xukumay dalka Yemen.
Shimbir lagu kala iibsaday malaayiin doolar
Ciidamada Yemen ee shimbirka qabtay oo taageero ka hela Sacuudi Carabiya ayaa waxa ay sheegeen inay shimbirka uga shaki qabaan inuu u basaasayey kooxda Xuutiyiinta ee ka soo horjeedda dowladda Yemen ee gacanta ka heleysa xulafada uu sacuudiga hoggaaminayo.
Khubaro ku sugan dalka Bulgaria ayaa shaaciyay in shimbirkaasi uu ka soo fakaday xilli ay howla cilmi baadhis u adeegsanayeen, waxay sheegeen in qalabka ay lugihiisa ku xireen ay ugu tala galeen oo kali ah iney kula socdaan shimbirka halka uu marayo, balse ay waayeen.
Waxay dowladda Yemen ka codsadeen iney Shimbirka ka soo fakaday ee ay ku raad joogeen ku soo wareejiyaan.
Balse ciidamada Yemen ee gacanta ku haya Gorgorka waxay ku adkeysteen iney sii deyn doonin oo shimbirka dambi culus looga shakisan yahay ilaa laga xaqiijiyana aan laga soo saari doonin xabsiga lagu haynayo.
Qalabka Gorgorka lugta ugu xirnaa
Cilmi baadhayaasha sheegay inuu ka soo fakaday Gorgorka basaasnimada looga shakisan yahay ayaa ku dooday in ay u adeegsanayeen cilmi baadhis oo kali ah, ayna dowladda Yemen wixi xiriir ah ay kala sameyn doonaan dhanka safaaradda Bulgaria ay ku leedahay dalka Yemen.